उज्यालो तिहारका अँध्यारा मन
रङ्ग, उमङ्ग र सत्सङ्गको रसिलो र उज्यालो पर्व तिहार (दीपावली)को मध्यान्तरमा हामी रमाइरहेका छौँ । आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, सहभावको विशेष अर्थ बोकेको यो पर्व सांस्कृतिक र धार्मिक दृष्टिबाट मात्र होइन सामाजिक, भाषिक, लैङ्गिक तथा राजनीतिक हिसाबले पनि यो पर्व उज्यालो हुन्छ । यो पर्वले सहभाव बोकेको हुन्छ । कला, संस्कार, संस्कृति, भाषा, धर्म र पर्वहरू सबैका साझा हुन् र रहन्छन् ।
तर हाम्रो मानवीय सोच, व्यवहार र संस्कारले यस्ता निधिहरूलाई समुदाय, धर्म, लिङ्ग र जात विशेषका बनाएको छ । तर जे होस् अलगअलग ठाउँमा भए पनि फरकफरक शैलीले हामीले यस्ता पर्वहरू मनाउने गरेका छौँ फरकफरक नाम दिएर भए पनि ।
जुनसुकै समुदायका भए पनि हाम्रा यस्ता पर्वहरूले दिने सन्देश एकै हुन्, ‘आपसी सद्भाव, सहभाव र पुनर्मिलन ।’
तिहार आफैँमा उज्यालो पर्व छ । यसको रसिलोपनले सबैलाई प्रेमिल बनाउँछ । अनुहारमा उज्यालो छाउँछ । तर चारैतिर उज्यालो भए पनि मन भने अँध्यारो हुनेहरू पनि छन् यहाँ । यहाँ उज्यालो पर्वका अँध्यारा मनहरूलाई खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।
काग अत्यन्त चलाख र सर्वभक्षी प्राणी मानिन्छ । कागले सबैलाई समान दृष्टिले हेर्छ भने यसले अन्नबालीमा लाग्ने कीरा, फट्याङ्ग्राहरू खाइदिन्छ । कागलाई यमराजको सन्देश सुनाउने यमदूतका रूपमा पनि लिइन्छ । काग यमराजको अत्यन्त प्रिय भक्त पनि मानिन्छ । त्यसैगरी, हाम्रो समाजमा प्रचलित काकगवेषण, काकन्याय, काकबलि आदि विविध शब्द कागसँगै सम्बन्धित छन् । कागको पूजा गर्नाले भगवानको सुखद खबर मिल्ने विश्वास पनि रहिआएको छ ।
तर, काग तिहारको रमाइलोसँगै अँध्यारो मन हुनेहरू पनि छन् यहाँ । तिहार शुरु भएको दिन हो काग तिहार । त्यसैले घरको मूलीलाई खर्च जोहो गर्ने विषयले मनमा अँध्यारो पार्छ । देउसे भैलेलाई उनीहरूको ‘डिमान्ड’अनुसार दक्षिणा दिनुपर्ने अवस्थाले त झन् उज्यालो नपसेको मनमा निस्पट्ट अँध्यारो हुन्छ । कसैकसैको जन्मदिन कागतिहारकै दिन पर्छ । कागजस्तै चलाख हुनू भनेर शुभकामना दिनेहरूसँग् त जन्मदिनवाला खुशी नै होलान् तर कागजस्तो कालो अनुहार र मन भएको भनेर खिल्ली उडाउने र कागजस्तै कुरा ओसारपसार गर्ने भनेर साथीभाइले गिज्याउने गरे भने तिहारमा मन कहाँबाट उज्यालो हुन्छ त ?
कुकुर तिहार यमपञ्चकको दोस्रो दिन अर्थात् कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन पर्छ । कुकुरतिहारका सम्बन्धमा विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक मान्यता रहँदै आएको पाइन्छ । यो दिनलाई नरक चतुर्दशी पनि भनिन्छ । कुकुरलाई पनि यमदूतका रूपमा लिइन्छ ।
कुकुर यमराजको अर्को प्रियभक्त हो । कुकुरलाई आज्ञापालक एवं रक्षक मात्र मानिँदैन, विभिन्न अपराध गर्ने अपराधीहरू पत्ता लगाउने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्य पनि कुकुरले गर्छ । कुकुरले घरको रेखदेख तथा चोरडाकाबाट बचाउने कार्य गरी मानिसलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।
त्यसैगरी कुनै प्राकृतिक प्रकोप तथा दैवी विपत्ति हुने बेलामा पूर्वसूचना समेत दिन्छ भनिन्छ । कुकुरलाई भैरवको वाहन पनि भनिन्छ । त्यसैले हामी कुकुर तिहारमा कुकुरलाई मन पर्ने खाना ख्वाई पूजा गरी माला लगाइदिन्छौं । अझ कुकुरलाई माया गर्नेहरूले कति खुशी भएर पूजा गर्लान् ।
तर, अपसोच, जसको कुकुर तिहारको दिन जन्मदिन पर्छ उनीहरूको लागि त वर्ष दिनभरिकै सबैभन्दा खराब दिन ठान्नेहरू पनि छन् । हुन त कार्तिक महिनामा जन्मने मानिसहरू सहनशील, धैर्यवान र मिहिनेती हुन्छन् भन्ने ज्योतिषीय मान्यता छ तर कार्तिक महिनामै पर्ने कुकुर तिहारकै दिन जन्मदिन पर्नेहरू त अझ भाग्यमानी । कुकुरजस्तो सचेत, इमानदार, रक्षक र निष्ठावान हुने प्रण पनि गर्ने दिन हो । मान्छेभन्दा पहिले चन्द्रमामा पुग्ने प्राणी हो कुकुर । तर के गर्नु साथीहरूले गर्नुसम्म बिल्ला (खिसी उडाउनु) गर्छन् ।
अझ घरमै कुकुर पाल्ने भरसक सँगै सुताउनेहरूले पनि साथीलाई भन्छन् ‘तेरो बर्थडे त कुकुर तिहारको दिन....हा हाहा...) मन त त्यसै अँध्यारो हुने नै भयो । कुकुरदेखि डराउने र कुकुरले टोकेकाहरू पनि कुकुर तिहारको दिन अँध्यारो मन नै लाउँछन्, दुस्मनलाई पूजा गरेको देखेर ।
कुनै पनि धार्मिक वा सामाजिक संस्कार गर्नु अघि गाईको गोबरले घरआँगन लिपपोत गर्ने, गाईको गहुँत सबैतिर छर्केर आफ्ना घरकोठा पवित्र तुल्याउने हिन्दूहरूको संस्कार छ । गाईलाई पशुधनका रूपमा लिइन्छ । हिन्दूहरू गाईलाई लक्ष्मी र गौमाताका रूप मान्छन् । गाईजात्रा, गाईपाला, गाईप्राणी, गौप्राणी आदि शब्दले गाईमा आधारित विविध प्रतीकात्मक अर्थ प्रदान गर्छ । लक्ष्मीलाई धन्यधान्यकी देवी एवं ऐश्वर्यकी प्रतीक मानिन्छ । कार्तिक कृष्ण औंसीको रातलाई अत्यन्त अँध्यारो रातका रूपमा लिइन्छ । यो अन्धकारमा रातलाई उज्यालोको प्रकाशले आलोकित पार्ने कार्य घरघरमा बत्ती बाली लक्ष्मीको आह्वान गरेर गरिन्छ ।
यसभित्र कुनै पनि किसिमको अन्धकारलाई आफूमा अन्तर्निहित चेतनाशक्तिको प्रकाशले हटाउनुपर्ने सन्देश पनि पाइन्छ । गाईलाई लक्ष्मीको प्रतीक मानेर त्यसै दिन लक्ष्मीपूजा पनि गरिन्छ । भगवान् रामचन्द्रले लोककल्याणको भावनाले रावणादि विविध असुरहरूको नाश गरेपछि कार्तिक कृष्ण औंसीको दिन अयोध्याको राजाका रूपमा राज्यारोहण गरेको खुसीयालीमा अयोध्यावासीले दीपावली गरेको प्रसङ्ग होस् वा यमराजले यमपञ्चकका पाँच दिन आफ्नी बहिनी यमुनाकहाँ बसेका कारण यस दिन मृत्यु हुने कुनै मानिसले नरक देख्नुनपर्ने विश्वासमा खुसी मनाउँदै दीपावली गर्ने प्रचलन आरम्भ भएको नै किन नहोस्, यी सबै प्रसङ्गमा यो दिनको ठूलो महत्व रहेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ ।
सुखसम्पत्ति र ऐश्वर्य अभिवृद्धिको मनोकामनासहित कार्तिक कृष्ण औंसीका दिन माता लक्ष्मीको विशेष रूपमा पूजाआजा र अर्चना गर्नु तथा त्यसपछि लक्ष्मीकै प्रसाद प्रयोग गरी आफ्ना दराज, सेफ, भण्डार आदिमा स्वस्तिक चिह्न अङ्कित गर्नु वा शुभलाभ लेख्नु हाम्रो धार्मिक परम्परा हो । दीपावलीमा “तमसोमा ज्योतिर्गमय’ अर्थात् अन्धकारबाट प्रकाशतर्फ लागि आफूलाई आत्मिक रूपमा सुखसन्तोष प्रदान गर भन्ने यस दिन चेलीबेटीहरू भैलो खेलेर रमाइलो गर्छन् ।
तिथिअनुसार कर्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन यो पर्व मनाइन्छ । वर्षका चार महत्वपूर्ण रातहरूमध्ये लक्ष्मीपूजाको रातलाई सुखरात्रि भनिन्छ । यस दिन स्त्री जाति विशेष गरी कुमारी केटीहरूले घरघरै गई भैलो खेल्ने चलन छ । यो दिन साँझमा घरघरमा दीपावली गर्ने र पटाका पड्काउने चलन छ । अँध्यारो औसीको दिनमा पनि चारैतिर उज्यालो हुन्छ । तर बत्ती नबलेको औंसीको रात झँै मन अँध्यारो हुनेहरू पनि यहाँ छन् । जसको लक्ष्मी पूजाको दिन घर जलेको हुन्छ, पटाका पड्काउँदा हात पोलेको हुन्छ, लक्ष्मीपूजाकै दिन आफन्त गुमाएका र पिङबाट लडेर घाइते भएकाहरूको पनि मन अँध्यारो हुन्छ ।
गोवद्र्धन पूजा (हल तिहार)
(हल तिहार) गोरु तिहार, हल तिहार वा गोवद्र्धन पूजा चौथो दिन मनाइन्छ । पौराणिक कथानुसार गोवद्र्धन पर्वत गोकुल नजिकै रहेको एक पर्वत हो । धार्मिक विश्वास अनुसार कृष्ण भगवान् गोकुलमा गोपालहरूसँग बस्दथे । गोपालहरू देवताका राजा इन्द्रको पूजा गर्ने गर्दथे तर इन्द्रबाट उनीहरूले केही पाउँदैन थिए ।
कृष्णले एकदिन गोकुलवासीहरूलाई केही नदिने इन्द्रको पूजा गर्नुभन्दा खनिज, घाँस, पानी, दाउरा दिने गोवद्र्धन पर्वतको पूजा गर्नु राम्रो हो भन्ने कुरा राख्छन् र सबैजना त्यसै गर्न राजी हुन्छन् र गोवद्र्धन पर्वतको पूजा हुन्छ ।
आफ्नो सट्टा गोवद्र्धन पर्वतलाई पूजा गरेकाले रिसाएका इन्द्रले गोकुलमा असिना र पानीको वृष्टि गराउँछन् । भगवान् कृष्णले गोवद्र्धन पर्वतलाई हातले उचालेर सबै गोकुलवासीहरूलाई आश्रय दिन्छन् र अन्त्यमा आफ्नो हार मानी गल्तीको लागि कृष्णसमक्ष क्षमा माग्छन् ।
भनिन्छ, त्यसै समयदेखि गोवद्र्धन पूजाको आरम्भ भएको हो । संस्कृतमा गौ भनेको गाई हो । त्यसैले गोवद्र्धन, गोकुल, गोपाल यी शब्दहरूले त्यस बेलाको समाजमा गाईलाई दिइएको सम्मानलाई प्रष्ट्याउँछ ।
गोवद्र्धन पूजाको दिन घरघरमा गाईको गोबरले गोवद्र्धन पर्वतको प्रतिमा बनाई त्यसैको पूजा गरिन्छ । यस दिन नेपालीहरूले वर्षभर अन्न उब्जाउन हलो तानी किसानलाई सहयोग गर्ने गोरुको पनि पूजा गर्दछन् । यो दिन जन्मदिन पर्नेको त मन कति अँध्यारो हुन्छ भन्ने कुरालाई कसरी व्यक्त गर्नु र ? साथीहरू सबैले भन्छन्, ‘गोरु ह्यापी बर्थ डे ।’ उफ् ।
भाइटीकाका विषयमा एउटा अत्यन्त प्रचलित जनउक्ति रहेको छः एकपटक एक जना चेलीले आफ्नो दाजुलाई टीका लाउँदै गर्दा यमराजको दूत उनको दाजुलाई लिन आइपुग्छ । यमदूतका अनुसार उनको दाजुको उमेर पुगिसक्यो अनि अब उनको मृत्यु निश्चय छ ।
ती चेलीले यमदूतलाई टीकाटालो नसकुञ्जेलसम्म पर्खिन भन्छिन् र टीकाटालोका क्रममा यमदूतलाई पनि सँगै राखेर टीका लगाई पूजा गर्छिन् । यसरी चेलीको श्रद्धा अनि सम्मानबाट खुशी भएका यमदूतले प्रसन्न भएर चेलीलाई वरदान माग्न भन्दा उनले मेरा दाजुलाई नलग्नू भनेर वरदान मागेर दाजुलाई बचाएको भन्ने भनाइ छ । अर्थात् चेलीको मायाले दाजुभाइको मृत्युसमेत टर्दछ भन्ने जनविश्वास रहेको छ ।
यमराजले पनि आफ्नी बहिनीसँग यमपञ्चकको पाँचौ दिन टीका लाउँदा वर मागिन् । मत्र्यलोक (पृथ्वी) का दिदीबहिनीले वरदानस्वरूप हरेक वर्ष दाजुभाइलाई यसैगरी टीका लगाउन र पुज्न पाऊन् भनी वर मागिन् । त्यसै बेलादेखि भाइटीकाको चलन चलिआएको किंवदन्ती रहेको छ । दीपावली अर्थात् तिहारको अन्तिम दिन भाइटीका हो । यसपछि तिहारलाई बिदा गरिन्छ । यस दिन पनि अँध्यारो मन हुनेहरू पनि छन् ।
विविध कारणले भाइटीका लगाउन नहुनेहरूको मनमा खिन्नता आउँछ । मन खुशी हुन सकेको पाइँदैन । दाजुभाइ र दिदीबहिनी नहुनेहरूका लागि पनि तिहारमा मन अँध्यारो नै हुन्छ ।